Malunga nathi - iDingzhou Longxiang Hardware Products Co, Ltd.
Sisebenza ngokukodwa ekuveliseni nasekuthumeleni kumazwe ngaphandle kocingo kunye neemveliso zocingo iminyaka emininzi.
SiQalile ukuQala ngo-2004, Siya kugqwesa ukuSebenza kunye nokuThumela ngaphandle kweFence yeFence kunye neeMveliso zeMcingo iminyaka emininzi.
Iimveliso zethu eziphambili zezi: I-Hexagonal Wire Netting, I-Welded Wire Mesh, i-Chain Link Fence, i-Fence Panel kunye ne-Post And Accessories, i-Wire Wire njl njl. Uhola wendlela, oololiwe, oomatshini, ezombane, ezolukiweyo, isinyithi, iMigodi, ukulima kunye nezinye iinkalo ezininzi.
Inkampani yethu inako ngokuhambelana neemfuno zabaThengi, uku-odola izinto ezahlukeneyo ngeemveliso zescreen.
Iminyaka emininzi, iNkampani ilandela i-Enterprise Tenet "yokusinda ngomgangatho, uphuculo ngegama", kwaye igcina ukwenza ukusebenza okuhle kumzi mveliso wescreen kunye nokufumana ukuthembela kwabasebenzisi abatsha nabadala. Ukuba kuyimfuneko, wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngephepha lewebhu okanye ngokubonisana ngefowuni, siya kukuvuyela ukukunceda. .
Kwiimveliso zenkampani yethu, abasebenzisi baya kuyenza, bayifakele, bangene ngaphakathi, bayisebenzise kwaye bayigcine ngokungqinelana ngqo nemiyalelo yokusebenza kweinjini kunye nemigaqo ecacileyo. Ukusilela kuchongwe njengengxaki esemgangathweni yemveliso, inkampani yethu iyakukusombulula yona.
Ukusilela kunye nelahleko ebangelwe ngumgangatho weemveliso zethu.inkampani yethu ayinaxanduva
Ngokusekwe kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu, amaxabiso okhuphiswano, kunye nenkonzo yethu epheleleyo, siqokelele amandla oqeqesho kunye namava, kwaye sizakhele igama elihle ebaleni. Kunye nophuhliso oluqhubekayo, siyazibophelela kungekuphela kwishishini lasekhaya laseTshayina kodwa nakwimarike yamanye amazwe. Ngamana ungasuswa ziimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo enomdla. Masivule isahluko esitsha sokuxhamla kunye nokuphumelela kabini.